आज केही मानिसहरूलाई-घर ठूलो बाथरूम भएको घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुख्य रूप आफ्नै घर र सुधारिएको डिजाइन आधुनिक अपार्टमेन्ट को मालिक छ। बाँकी, प्राविधिक नवाचारै को एक किसिम लैस आफ्नो धुलाई कोठा अनुकूल छ। Luxus - शवर, पूर्ण अनिवार्य यस्तै अवस्थामा आफूलाई फेला गर्नेहरूलाई को आवश्यकताहरु अनुपालन जो।
संसारमा showering लागि व्यक्तिगत केबिन धुलाई को उत्पादन मा संलग्न छन् कि धेरै कम्पनीहरु छन्। यी यस्ता Kermi, Hyber, Hueppe र CRW जर्मनी, जक्यूजी, Albatros र CERUTTI देखि इटाली ले, फिनिश Timo र Ido जस्ता चिरपरिचित कम्पनीहरु, साथै चिनियाँ दृढ Appollo समावेश गर्नुहोस्। यसका साथ तिनीहरूसँग छैन विश्व बजार अन्तिम स्थानमा छ चेक निगम Luxus लाग्छ। शवर - यो मुख्य उत्पादन कम्पनी द्वारा निर्मित छ। किन जसको लागि बिक्री जाने सबै मोडेल, राम्रो तरिकाले बाहिर लाग्यो र एक पर्याप्त उच्च उपभोक्ता गुण शायद कि छ।
Luxus - शवर मात्र सहज, तर पनि व्यावहारिक छ। पर्खालहरु को निर्माण केही मोडेल र अद्वितीय एक्रिलिक कालो ग्लास मोटाई मा प्रयोग गरिन्छ लागि 1 सेन्टिमिटरले छ। कारण विशेष विधि विशेष quenching र staining गर्न भौतिक पर्याप्त सानो खरोंच र अन्य यांत्रिक क्षति सबै प्रकारका गर्न प्रतिरोधी छ। साथै, सानो घर पनि बलियो पर्याप्त पैन संग सुसज्जित, मूल संरचना को एक समग्र बनेको छ। केही उदाहरणहरू थप एकीकृत बाफ बिजुली र अतिरिक्त सुविधा भँवर मा। एक स्पर्श प्यानल अपरेसन सानो घर थप सुविधाजनक र आरामदायी बनाउँछ।
आफ्नो छनौट जाँदैछन् गर्नेहरूलाई, थाहा हुनुपर्छ भन्ने Luxus - लाभ को एक नम्बर छ जो शवर,:
समाप्त उत्पादन प्रत्येक आधारभूत विवरण खरीदार डिजाइन को विश्वसनीयता मा एक निश्चित विश्वास छ कि पर्याप्त बल को सामाग्री को छन्। उदाहरणका लागि, एक फ्रेम स्टेनलेस स्टील बनेको, सुधार स्थायित्व प्रदान र निर्माता को ग्यारेन्टी मिलाउँछ।
चेक बूथ मा प्राण लागि कुनै अतिरिक्त तत्व। हरेक विवरण विशिष्ट चाहेको समारोह छ।
सबै प्रयोग गर्न सबैभन्दा Ergonomic र आराम गर्दै छन्।
छत र ट्रे, शवर बाडों मानव स्वास्थ्य को लागि बिल्कुल सुरक्षित छ जो सेनेटरी एक्रिलिक, को छन्।
डिजाइन को सादगी यसको स्थापना सजिलो र गति लागि प्रदान गर्दछ।
सकिन गर्न एक विशेष उपकरण तपाईंलाई द्रुत सानो घर सफा र यो चिस्यान देखि जारी गर्न अनुमति दिन्छ।
को चटाई को नालीदार सतह सामान्य कि उत्पादन सुरक्षा संकेत, सम्भव पर्ची रोक्छ।
बाथरूम तल्ला मा चिस्यान को ingress रोक्न र सानो घर भित्र पूरा छाप प्रदान गर्न स्लाइड ढोका।
यी सबै सुविधाहरू खरीदार खातामा लिनुपर्छ एक वा अर्को निर्माता पक्षमा एक विकल्प बनाउन स्पष्ट लाभ जोड।
मुख्य समस्या ठाउँ खाली को सानो आकारको अपार्टमेन्ट को कमी छ। मान्छे वर्तमान परिस्थितिको अनुकूल रचनात्मक समाधान खोज्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा बाथरूम, आदर्श विकल्प गहिरो ट्रे संग शवर गर्न हुनेछ। यसको निर्माण दुई प्रमुख समस्या समाधान गर्न यस्तो तरिका मा योजना छ:
जबकि सान्त्वना को इच्छित स्तर कायम राख्न ठाउँ सुरक्षित।
गहिरो ट्रे संग शवर सानो घर सजिलै solves यी समस्याहरू दुवै। पहिलो, यो पानी उपचार लिनका लागि सबैभन्दा सहज ठाउँ सिर्जना गर्छ। दोश्रो, कारण उच्च रिम (25-35 सेन्टिमिटर) यो उपकरण मूल मिनी-स्नान बन्नेछ। इच्छित भने, यो साना बच्चाहरु स्नान वा लाँड्री soaking लागि स्थानको रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै अवस्थामा त्यहाँ उपभोक्ता को लागि एक स्पष्ट लाभ छ। यस्तो केबिन मा Pallets विभिन्न आकारहरू को हुन सक्छ:
एक सर्कल को चौथाई;
एक मिनी-स्नान को पहिले नै उल्लेख लाभ बाहेक अन्य सकारात्मक गुणहरू को एक नम्बर छ:
सुविधाहरू यो एकदम को वार्मिंग असर र अब पनि कोठामा भित्र अनमोल गर्मी पनि कायम रहन्छ।
यो लुगा धुने बेला चटाई भर्नु गर्दा पानी बचत गर्ने पारंपरिक स्नान गर्न तुलना सानो घर अनुमति दिन्छ।
बाहिरी फ्रेम तपाईं सिस्टम भित्र संचार लुकाउन अनुमति दिन्छ।
कारण यी गुणहरू, मालिक त्यहाँ वस्तु चयन गर्दा बेवास्ता गर्न सकिन्छ कि थप सुविधाहरू छन्।
चेक उत्पादनहरु साधारण उपभोक्ताहरु को के लाग्छ? तिनीहरूले मन शवर Luxus के? धेरै मानिसहरू को समीक्षा कम्पनीको ईन्जिनियरहरु र डिजाइनर आफ्नो काम प्रदर्शन, व्यर्थमा छैन काम भनेर भनिरहेका छन्। तिनीहरूले सामान्य प्राण सट्टा छन् भन्ने तथ्यलाई जस्तै मालिक, वास्तव मा, वर्तमान बहु-समारोह उपकरण हुन्छन्।
पानी को मानक प्रक्रिया साथै, तिनीहरूले, मालिश गर्न रेडियो सुन्न, वा निर्मित फोनमा मित्र कुरा मौका छ। यो सबै धेरै असामान्य छ, तर एकै समयमा धेरै राम्रो। को कोठामा भित्र रोशनी सम्भव सही मुड सिर्जना गर्न बनाउँछ, र राम्रो वेंटिलेशन कुनै पनि असुविधा को कुनै पनि सम्भावना समाप्त। तर, यस्तो उपकरणहरू को लाभ संग यसको कमियां छ। मात्र यदि केन्द्रीय पानी आपूर्ति मा पर्याप्त तरल पदार्थ दबाव पहिले, अतिरिक्त उपचार (भाप स्नान र भँवर) सम्भव छ। दोश्रो, यस्तो उत्पादनहरु को मूल्य एक उच्च स्तर मा राखिन्छ। सबैले 20 60 हजार rubles को दायरा मा खरिद गर्न सक्षम छ। तर यी मुद्दाहरू सजिलै क्रेडिट वा installment भुक्तानीको मद्दत संग हल गर्न सकिन्छ। आज, धेरै विक्रेताहरु आफ्नो ग्राहकहरु गणना यस्तो विधि प्रस्ताव।
नमूना कुलीन पाइपलाइन
आज चेक कम्पनी को सबै भन्दा उन्नत मोडेल को एक भँवर Luxus 520. यो एकाइ 2150 X 1200 X 800 मिमी को आयाम छ छलफल छ शवर। यसको भित्ताहरू र ढोका Tinted ग्लास को छन्, र भित्री एक ठाउँमा डिजाइन गरिएको छ।
मोडेल बन्द प्रकार एक गैर मानक आकार छ। यसले विशेष originality र दृश्य अपील दिन्छ। डिजाइन गरेर टैक्सी माथिल्लो र प्रदान गरिएको छ एक वर्षा शवर, रोशनी, तापमान नियन्त्रक, तातो रैक, तौलिया र डिटर्जेंट लागि एउटा सानो तखता, एकयुपंचर मालिश, रेडियो र संडसी लागि उपकरण। उत्पादन एक परेशानी-मुक्त लघु स्नान यसलाई उत्तेजित गर्दछ जो उच्च एक्रिलिक ट्रे (430 मिमी), संग पूरक छ। को रियर पर्खाल र मोटाइ6मिमी को Tinted ग्लास बनेको डबल ढोका। बीहड निर्माण बलियो इस्पात फ्रेम थप्छ। यो टैक्सी भेद, विशेषज्ञहरु अनुसार, थप आकर्षक र होनहार मानिन्छ।
केही वर्णन गर्न सकिन्छ अन्यथा गोठ शवर Luxus 023D। यो मोडेल देखिन्छ परिचित कार्यक्षमता संग क्लासिक डिजाइन संयोजन, एक सानो सजिलो देखिन्छ। रिसेप्शन समयमा, पानी उपचार हुन सक्छ:
दुवै माथिल्लो र हात शवर को प्रयोग;
पछाडि र खुट्टा को मालिश प्रदर्शन;
स्पर्श निर्मित प्रदर्शन प्रयोग गरेर सबै प्रक्रियाहरू नियन्त्रण लागू।
प्रबलित इस्पात कंकाल संरचनात्मक बल र स्थायित्व र प्रदान विरोधी-पर्ची कोटिंग पैन यसको प्रयोग को सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। यो सानो घर थप संकुचित आयाम (2160 x 90 x 90 सेमी) र एक चौथाई सर्कल को आकार छ। त्यसैले, यो प्रयोग पारदर्शी ग्लास नेत्रहीन भित्रबाट यसलाई आकार बढ्ने। एक सानो घर मात्र होइन सुविधाजनक, तर पनि राम्रो मा नुहाउनु लिएर। तपाईं सुरक्षित आराम र यस यन्त्रको सबै उन्नत सुविधाहरू फाइदा लिन खुसी हुन सक्छ।
स्लोभेनिया, जुबजाना - लघु आकर्षण
साथीहरूबाट कसरी साथीहरू हटाउनुहुन्छ: सामाजिक सञ्जालहरूबाट साथीहरू मेट्नुहोस्